Gabriel Jesus Oo Man City Ka Diiday Dalab Heshiis Kordhin Ah [Sabab] %
Weerar yahanka kooxda kubada cagta Manchester City, wiilka lagu magacaabo Gabriel Jesus ayaa wuxuu go’aan saday inuu dib udhigo wada hadalo heshiis kordhin ah, kuwaasoo uu la geli lahaa kooxdiisa, sida ay ay sheegayaan wararka.
Laacibkaan oo kamid ahaa safkii uu macalinka Brazil uyeeray kulamadii saaxiibtinimo ee la dheelay Isbuucaan iyo kii ka horeeyay ayaa wuxuu soo bandhigay muuqaal ciyaareed heer sare ah, isagoon dhaliyay goolkii guusha kulankii ay wajaheen Germany.
Sida laga soo xigtay Majalada The Times ee dalka Ingiriiska Jesus ayaa wuxuu diiday dalab cusub kaasoo dhan 90,000 pounds oo Isbuucii uu qaaban lahaa, isagoona sheegay inuu arrintaas gor-gortan uu ka geli doono kadib aduunka koobk aduunka.
Waxaa la fahansan yahay in laacibkaan uu doonayo inuu 100 Milyan oo Bonw kuwaasoo uu qaadan doono Isbuucii si uu qalainka ugu jiido heshiis cusub, maadaama heshiiskiisa uu ku eg yahay sanadka 2022 oo ah waqti aad udhow.
Sikastaba, arrintaan ayaa waxay utahay maamulka Manchester City mid aanan fiicneen maadaama xidigaan oo sanad ciyaareedkii hore kusoo biiray uu yahay mid shiishka ay ku hayaan kooxo waa weyn oo xiiso waali u ah.
Kooxaha illaa iyo haatan la ogyahay inay doonayaa ayaa waxaa kamid ah PSG oo wadanka Faransiiska ka dhisan, kuwaasoo raba inay ku xoojiyaan safkooda weerarka, maadaama kaliya hada uu ujoogo Cavani oo afka hore ama Lamberka 9aad ka dheela.
Jeenyo Oo Cayaaraysa Kulankeeda Kowaad Wajiga Labaad ee Horyaalka Somali Premier League